स्रोत ब्रिटेन होलसेल आपूर्तिकर्ता बनाम द ग्लोब र खोजीहरू - कुन B2B थोक वेबसाइटले तपाईंलाई उत्तम सेवा प्रदान गर्दछ? - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक जनवरी 7, 2021 जनवरी 6, 2021 सबै-सितारा समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
यो सबै देखा पर्दछ Esourses'मार्केटिंग बेच्न डिजाइन गरिएको छ पाठ्यक्रमहरू। तिनीहरू आफ्नो स्थापित थोक आधारमा निर्भर छन्। ग्लोब किन्नुहोस् एक मात्र कम्पनीको रूपमा देखा पर्दछ जुन आक्रामक, डिजिटल र व्यावसायिक रूपमा लगभग सबै देश र भाषामा उत्पादनहरू बजार गर्दछ। त्यसकारण उनीहरू यति छिटो बढ्दैछन् कि छैन!
तल केहि धेरै साधारण तुलनाहरू छन्।
स्रोत युके थोक आपूर्तिकर्ता VS ग्लोब किन्नुहोस्
धेरै स्तरका सेवाहरू, बुझ्न कठिन छ। कुल खर्च प्रत्येक बिक्रीको एक अंश चार्ज गर्नु मात्र लागत हो। कुनै बाधा छैन।
प्राप्त गर्न गाह्रो, वा जारी नै छ। सेट अप तिनीहरू तपाईं संग काम।
संग स्रोत युके थोक आपूर्तिकर्ता हामीले उनीहरूको थोक लिस्टिंग सेवा खरीद गर्‍यौं तर अलमल्लमा पर्यौं र पुन: लागू गर्नुपर्‍यो वा प्रत्येक दिन लगईन गर्नको लागि भुक्तान गर्नुपर्‍यो। ग्लोब किन्नुहोस् के कसैले हामीसँग सम्पर्क गरे र हामीबाट हिंडे प्लस सबै निःशुल्क छ।
उत्पादनहरूको लागि क्रेता खोजी
धेरै गरीब - समय खेर फालियो। खोज छिटो, खुला र इमानदार खोजीहरू।
मुख्य रूपमा मितिबद्ध मिति अनुक्रमणिका प्रणाली वा निर्देशिका प्रयोग गर्नुहोस्
अंग्रेजीमा अन्य साइटहरूमा सम्बन्धित छैन। निर्देशिका अनलाइन प्रत्येक भाषामा ग्राफिकल।
हामीले भेट्यौं स्रोत युके थोक आपूर्तिकर्ता थोरै केन्द्रीय भन्दा पनि गरीब र पछाडि, यदि यो सम्भव छ भने। तिनीहरूको b2b र होलसेल खोजीहरूले कुनै इन्द्रिय नै गरेनन्। त्यहाँ "एक स्टप" किनमेल को कुनै भावना छैन जस्तो देखिन्छ।
के तपाइँ तपाइँको b2b र थोक उत्पादनहरू बेच्न चाहानुहुन्छ, वा केवल तपाइँको कम्पनी सूचीबद्ध छ?
यस्तो देखिन्छ कि तपाईंले लिस्टिंग बाहेक केही पाउनु भएन
तिनीहरूको दशकहरु पुरानो निर्देशिका मा। मार्केटिङ उत्पादनहरु को बारे मा दैनिक लेखहरु, सूचीबद्ध र समाचार प्रकाशित।
एक धेरै ढिलो र मा केन्द्रित
पुरानो अनुक्रमणिका प्रणाली। खरीददार विचारहरु खोज्दै द्रुत खोज र ग्राफिकल सूचकांक
हरेक प्रमुख भाषामा।
केवल अंग्रेजी - अनुवाद प्रदान गरिएको छैन। भाषा सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पादनको लागि १०० भन्दा बढी भाषाहरूमा तत्काल खोजी।
स्रोत युके थोक आपूर्तिकर्ता , जस्तै संग थोक केन्द्र, धेरै पुरानो प्रणाली प्रयोग गर्दैछ, तर अझै स्थापित नेताहरू हुन्।
ग्लोब किन्नुहोस् नयाँ हो, र ग्लोबल, सरल, कुनै पनि देशबाट थोक खोजीहरू नेभिगेट गर्न सजिलोसँग डिजाइन गरिएको थियो। उनीहरूले अधिक प्रभावी वन स्टप थोक अनुभव सिर्जना गरे जुन धेरै अपूर्व वैश्विक सुधारहरूको प्रयोग गर्दछ। यो अझै सम्म आफ्नो पहिलो वर्ष मा छ, यो धेरै सानो तर एक रकेट जस्तै बढ्दै छ।
को लागी फाइदाहरु ग्लोब किन्नुहोस् के ती साना भए पनि उनीहरू तपाईंको लागि अधिक कामहरू गर्छन्।
B2B सांप्रदायिक समाचार ग्लोब किन्नुहोस् थोक अनलाइन थोक आपूर्तिकर्ता
एउटा महामारीको समयमा अमेरिका भरिका २० शहरहरूमा यात्रा गर्दा मैले के सिकेका थिए
तपाईंको परिवारलाई कार दुर्घटनाबाट कसरी बच्ने भनेर सुझावहरू